Nabata na peeji nke amụma nzuzo nke www.techbuild.africa
Nzuzo dị n'ịntanetị dị mkpa nye ndị ọrụ blog na nke a bụ amụma nzuzo anyị gbasara ndị ọrụ nke Blog anyị ("Ọbịa") ndị na-eleta na-enweghị ịkpọtụrụ azụmahịa na ndị ọbịa na-edebanye aha iji zụta azụmahịa na saịtị ma jiri ọrụ dị iche iche enyere site techbuild.africa (mkpokọta, "Ọrụ") ("Ndị ahịa edere ikike").
techbuild.africa na-asọpụrụ nzuzo gị
Ozi nkeonwe ọ bụla enyere anyị nke gụnyere gụnyere yana aha, adreesị, nọmba ekwentị na adreesị ozi-e agaghị ahapụ, ree ya, ma ọ bụ gbazite ya na ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ndị ọzọ na-abụghị nke techbuild.africa belụsọ site na ikikere awara awara nke onye ọrụ.
Nkọwapụta kaadị akwụmụgwọ
techbuild.africa anaghị achọrọ Kaadị nkọwa nkọwa ma na-eduzi na onye ọrụ agaghị ekewa ọ bụla maka ma ọ bụ n'ụzọ ma ọ bụ na-eru ihe ọ bụla dị otú a arịrịọ a weebụsaịtị.
Nkwụ ụgwọ niile achọrọ na mkpakọrịta anyị na ndị ọrụ ga-edozi ya site n'aka Onye Ahịa Akaụntụ na ndị ọrụ ga-enwe redirection na weebụsaịtị ndị ahụ maka azụmahịa na ịkwụ ụgwọ ego
techbuild.africa abughi oru maka ọdịnaya nke saiti intaneti di iche. Onye ọrụ na-adụ ọdụ ka ị gụọ iwu nzuzo nke saịtị ndị dị na mpụga tupu igosipụta ozi nkeonwe ọ bụla.
A “kuki” bụ obere data ederede faịlụ na-etinye na ihe nchọgharị gị na-enye ohere techbuild.africa ịmata gị oge ọ bụla ị gara na saịtị a (customization wdg). Kuki n'onwe ha enweghị ozi nkeonwe ọ bụla, na techbuild.africa anaghị eji kuki iji nakọta ozi nkeonwe. Ndị na-eweta ọdịnaya nke ndị ọzọ nwekwara ike iji kuki dị ka faili ntanetị akụkọ.
Kuki Google na DoubleClick DART
Google, dịka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi na saịtị a.
Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ anyị dabere na nleta ha na saịtị a na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị.
Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na iwu nzuzo nke mgbasa ozi Google na ọdịnaya network.
Itorchọta ndị ọbịa
techbuild.africa na-eji ngwanrọ nyocha dịka Google Analytics maka ebumnuche ọnụ ọgụgụ. N'ihi nzube nke stats IP gị (Internet Protocol) Adreesị, nchọgharị, ihuenyo mkpebi, sistemụ jidere. Anyị na techbuild.africa na-eji ozi a naanị maka ebumnuche ọnụ ọgụgụ ma ghara ịkekọrịta ya na ndị ọzọ.
Nkwupụta Onye Ọrụ
techbuild.africa nwere ike ịhapụ ndị ọrụ ịza ajụjụ na saịtị ahụ. Agbanyeghị, anyị nwere ikike niile ịnabata ma ọ bụ jụ nkwupụta ọ bụla dabere na ezi uche anyị. Mgbe ị na-ekwu banyere techbuild.africa biko zere iji ọdịnaya nke na-adabaghị ma ọ bụ na-adịghị mkpa isiokwu dị iche iche. Nkwupụta bụ naanị echiche nke ndị nwe ha ma ọ bụchaghị echiche nke techbuild.africa
Cheta Ihe Ize Ndụ Ya Mgbe ọ bụla ị Jiri Usentanetị
Ọ bụ ezie na anyị na-eme ike anyị niile iji kpuchido ozi nkeonwe ndị ọrụ, anyị enweghị ike ịkwado nchebe nke ozi ọ bụla a na-ebute site na tebubuild.africa na onye ọrụ bụ naanị ọrụ maka ijide nzuzo nke okwuntughe ọ bụla ma ọ bụ ozi akaụntụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, saịtị ma ọ bụ ọrụ Internetntanetị ndị ọzọ enwere ike ịnweta site na techbuild.africa nwere data dị iche na omume nzuzo na-anọghị na anyị, yabụ anyị na-ekwupụta ibu ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ụgwọ maka iwu ma ọ bụ omume ha.
Biko gakwuru webmaster ndị ahụ na ndị ọzọ ozugbo ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo ha.
techbuild.africa nwere ikike ịgbanwe, gbanwee, ma ọ bụ melite iwu a n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ọkwa na onye ọrụ. A ga-etinye mgbanwe dị ukwuu n'ụzọ anyị si eji ozi nkeonwe gị na saịtị a.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iwu nzuzo a, biko jiri bọtịnụ ịkpọtụrụ n'elu.